Tippani Bislesion Archives - Page 47 of 68 - सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
जुझारु क्रान्तिकारी मजदुर आन्दोलनको विकास गरौं !
समाजमा रहेका प्राणीहरुमध्ये मानिस एउटा छुट्टै चेतनशील प्राणी हो । मानिसले आफ्नो विगत, वर्तमान र भविष्यका बारेमा सोचेर योजना निर्माण गर्न सक्दछ । त्यसैले पशुभन्दा पृथक ढंगबाट आफूलाई उभ्याईरहेको छ । तर समाजमा मानिसले समाज परिचालन्का क्रममा दुई प्रकारका सोचाईहरुको निर्माण गर्न थाले । एउटा सकरात्मक त अर्को नकरात्मक । न्यून ज्ञान र चेतना भएतापनि […]
राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा भएको कार्यगत एकता तोड्नु राष्ट्रहित विरुद्धको कुरा हो
प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त पारी जनताको जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न क्रान्तिकारीहरुबीचको एकता अनिवार्य शर्त हो । क्रान्तिकारीहरुबीचमा एकता नभईकन जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सकिंदैन । यतिसम्म कि खास अवस्थामा मुख्य दुश्मनलाई हराउन त्यसको विरुद्ध उभिने प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग पनि संयुक्त मोर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो महायुद्धको समयमा जब जर्मन फासीवादले सोभियत समाजवादी राज्यसत्तामाथि धावा बोल्यो, त्यसबेला स्टालिनले […]
नेपाली क्रान्तिका समस्या र युवाहरुको दायित्व
१– समस्याको पहिचान : हामीले नेपाललाई अर्ध सामन्ती, अर्ध औपनिवेशिक तथा नव औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गर्न र नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना गरी समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नका लागि धेरै परिश्रम गर्दै आएका छौं । विभिन्न जनआन्दोलन, जनसंघर्ष र दशवर्षे महान जनयुद्ध पनि सञ्चालित भए । परन्तु क्रान्तिले गम्भीर धक्का खायो । अहिले पनि प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र व्यवस्था […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Bichar, Feature News, Tippani Bislesion, फ्लयास ब्याक
हिँजोआज नेपाल मण्डलमा गरिबगुरुवाहरूका ससाना लालावालाहरूको स्कूल भर्नाको विषयमा हङ्गामा नै मच्चिएको छ । वामपन्थी (उर्फ हामपन्थी) नामको हात्तीले सरकारको हौदामा बसेपछि विभिन्न प्रकारका चकाचौँध मच्चाएको छ । राष्ट्रवादीको पगरी गुथेर चुनावमा भोट बटुलेका पर्धानमन्त्रीले गुज्जर भैय्याको चाकडी गरेर राष्ट्रवादको खाँटी परिचय त दिए । विगतका असमान सन्धी सम्झौता दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने वचन गुज्जर भैय्यालाई […]
१) नेपालको राष्ट्रियता नेपालको राष्ट्रियता नेपाली जनताको एकीकृत भावनाको प्रतीक हो । यो भावनाले त्यसबेलामात्र पूर्णता प्राप्त गर्दछ जतिवेला नेपालको राष्ट्रिय–एकता बलियो हुन्छ । नेपाल विभिन्न जातिका जनता, विविध भाषा र विविध धर्म–संस्कृतिले युक्त मुलुक हो र यो विविधता नै नेपालको सुन्दरता हो । तर सदिऔंदेखि एक विशेषधिकार प्राप्त जाति, भाषा धर्म र संस्कृतिले अन्य […]
पहिलो संविधानसभाको अवसान र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको अवस्था निकै नै विवादित रहेको थियो । त्यसको स्पष्ट झलक संविधानमा परेको छ । विश्वमा प्रचलन के रहेको छ भने संविधान भनेको देशको मूल कानुनको स्थितिमा रहन्छ । तर नेपालको दोस्रो संविधानसभाको संविधान निर्मातामा आत्मविश्वास यति दुर्वल रहेको पाइन्छ कि संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँने हक प्रदान गर्न […]
नेपाल अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक एवं नवऔपनिवेशिक देश रहिआएको छ । नयाँ जनवादी क्रान्तिले यो समस्याको हल गर्दछ । विगतमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको पक्षमा उभिएका क्रान्तिकारी पार्टीहरु र नेता तथा कार्यकर्ताहरु साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी आतंकका कारण आफ्नो रंग बदल्न पुगेका छन् । विगतमा देश, जनता, पार्टी र क्रान्तिको पक्षमा गरिएका त्याग, तपस्या, बलिदान जेल, नेल, घाइते […]
राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि आन्दोलन निर्विकल्प
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत २३ गतेदेखि २५ गतेसम्मको भारत भ्रमण सकी स्वदेश फर्किसक्नुभएको छ । विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले भारत भ्रमण गर्दा के–के असमान सन्धिसम्झौता गर्नेछन् भनेर स्वाभिमानी नेपालीहरु चिन्तिन हुनुपथ्र्याे । यो पाला पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमण जाँदा त्यो प्रकारको अवस्था सृजना भयो । पहिलो कुरा भ्रमणमा जानुभन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्रीले पहिलेका […]
नयाँ दिल्ली । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण प्रवासी नेपालीहरुको लागि निराशाजनक रह्यो । प्रवासी जनताले भोगी रहेका समस्याहरुलाई देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष बुझाउन पाउने आशा गरेका हजारौं नेपाली नागरिकहरुलाई प्रधानमन्त्रीलाई केपी शर्मा ओलीले भेट्न अस्वीकार गरि हतास बनाएका छन् । नेपालहरुलाई दिनहुँ आइ पर्ने समस्यालाई लिएर नेपाली एकता समाज भारतले हजारौं हस्ताक्षर भएको […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Tippani Bislesion
देशको रक्षा गर्ने कि भारतको गुलाम हुने ?
प्रधानमन्त्री के पी ओली ले २३ —२५ चैत्रमा भारत भ्रमण गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । भाषा जे जस्तो राखिएपनि यो भ्रमण भारतको आदेश तामेली मात्र हो । किनकि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी हुनुपूर्व नै भारतले भ्रमणको घोषणा गरिसकेको थियो । उनको भारत भ्रमणबारे नेपाली जनमत विभाजित छ । ठिक वा बेठिक भन्दा पनि उनी […]